+977 01-5244451, 01-5190010
मानिसको परीक्षा – सराहना खड्का
एका देशमा एउटा ठुलो तर अस्तव्यस्त सहर थियो । त्यहाँ ठुला ठुला भवनहरू थिए । त्यहाँ धेरै धनी धनी मानिसहरूको बसोवास थियो । अनि केही त धेरै गरिब मानिसहरू पनि थिए । गरिब मानिसहरू धेरै जसोबाट अपहेलित हुन्थे । तर त्यही सहरमा मनुष्यता घट्दो अवस्था थियो अनि नैतिकता र सहयोगी भावनाको चरम अभाव थियो । मानिसहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको खुब घमण्ड थियो । मात्र केही व्यक्तिहरू मनवीय धर्मको पालना गर्थे ।
त्यस्तै केही व्यक्तिहरूमध्ये चेतन एक थियो । उसका आमाबा पहिले धेरै गरिब थिए । आफ्नै सङ्घर्ष र मिहिनेतले उसले आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थिति सुधारेको थियो । गरिबको पीडा बुझेको चेतन न त धनको घमण्ड गथ्र्यो न त धनको लोभ ।
उसको काकाको छोरा मन भने आफ्नो पिताको सम्पत्तिको घमण्ड गथ्र्यो । जे पायो त्यही कुराहरूमा पैसा खर्च ग¥र्यो । यो उसको मात्र स्वभाव थिएन् । सहरका थुप्रै मानिसको स्वभाव यस्ते थियो ।
यस जगतमा भइरहेका सबै क्रियाकलाप स्वर्गबाट भगवान् हेर्दै थिए । उनलाई पृथ्वीमा थोरै मात्र राम्रा मानिस छन् भन्ने कुराको बोध भएपछि उनी पृथ्वीबाट घमण्ड घटाउन र सबैलाई शिक्षा दिन भनी आफँै धर्तीमा आए, एउटा माग्नेको रूप लिएर । उनी मानिसको परीक्षा लिन र असल मानिसलाई वरदान दिएर अन्य सबैलाई शिक्षा दिन चाहन्थे ।
भगवान यसरी नै महिनौँ र बर्सौँ भौतारिए, माग्नेको स्वरूपमा तर कोही उनको परीक्षामा सफल हुन सकेन । निःस्वार्थीहरू आफुले गरेको दानको घमण्ड गर्थे, लोभीहरू दान नै दिँदैनन्थे ।
एकदिनको कुरो हो, माग्ने मन्दिरका भर्‍याङहरूमा सुतिरहेको थियो । उसका अगाडि एउटा टिनको बटुको थियो, त्यो बटुको खाली थियो । अरू बुधबार जस्तै त्यस मन्दिरमा धेरै भिडभाड थिएन । चेतन र मन त्यही दिन मन्दिर गएका थिए । उनीहरू जाँदा मन्दिर खाली थियो । मात्र माग्ने थियो । भगवानलाई चढाउन चेतनले केही चामल बोकेकोे थियो । मन भने खाली हात आएको थियो ।
भ¥याङमा सुतेको माग्ने देखेर मनले भन्यो “ए माग्ने ! यसरी सबै द्घार नै छेकेर किन सुतेको हँ ? हट् यहाँबाट”, त्यसपछि उसले झर्किँदै चेतनलाई भन्यो, “दाइ, हिजो आज यस सहरमा कति माग्ने ? दिक्क लागि सक्यो मलाई त ।” चेतनले भने केही भनेन । माग्ने बिस्तारै उठ्यो र अलि पर गई बस्यो ।
उनीहरू पूजा गरेर फर्के । फर्किंदा त माग्नेलाई ढलिरहेको देखे । सबै कुरा छाडेर चेतन भने माग्नेको सहयोग गर्न गयो । मन चाँिह माग्ने भन्दा परै बस्यो ।
“के भयो तपाईंलाई ? आउनुस् यहाँ बस्नुस्, यो पानी पिउनुस् भन्दै चेतनले माग्नेलाई पानी दियो । माग्नेले भन्यो, “खाना” । चेतनले जुरुकक् उठेर टपरी लिन गयो । तर टपरी भने हिलोमा खसेको रहेछ । मात्र दुई गेडा अन्न थियो टपरीमा चाहिँ ।
“अहिले त यति मात्र छ मसँग ।”, उसले टपरी र दुई गेडा अन्न माग्नेलाई दियो । ऊ छिटो कुद्दै नजिकैको पसलबाट केह फलफुल किनेर फर्कियो । उसले माग्नेलाई त्यो फलफुल पनि दियो । त्यसपछि त आँखा झिम्काएको गतिमा माग्ने त्यहाँबाट हरायो र त्यहाँ भगवान प्रकट भए । उनले भने, “चेतन तिमीले मेरो परीक्षामा उत्तीर्ण गर्‍यौ । तिमी सबैको लागि उदाहरण हौ । लाऊ यो दुई दाना अन्न तिम्रो, तिमी नै राख । यो म सुन बनाइदिन्छु । यो मेरो वरदान हो” ।
चेतन छक्क पर्‍यो, मनमा पश्चाताप भयो । असल मान्छे जहिल्यै असल हुन्छ । चेतनले त्यो सुनका दुई गेडा समाजसेवामा नै खर्चियो ।
चेतनको र उसको असल बानी सबैले थाहा पाए । उसबाट धेरैले सहयोग गर्ने र घमण्ड नगर्ने शिक्षा पाए । त्यो घटना देख्ने मन चाहिँ जीवनभरि पश्चातापमै बाँच्यो तर कहिल्यै सुध्रिएन ।
कक्षा : नौ
LeaveaComment/Feedback:
Pathshala Model United Nations 2075
लागुपदार्थ दुव्र्यसन तथा यसका दुष्परिणामहरू – सुनिती मण्डल
तेह्र दिने यात्रा संस्मरणको टिपोट – धर्म पोखरेल
मेरी प्यारी आमा : साम्राज्ञी न्यौपाने
Drawing : Salong Bir Thapa
शरिरीक खेल पौडी : जेनिक खनाल
World Yoga Day Celebration 2018
Glimpses of SEE Felicitation 2075
Glimpses of Rice Plantation
Certificate Winners of Handwriting Competition – 2075
Tweets by pnf2002
Pathshala E-magazine is Online magazine of Pathshala Nepal Foundation, english medium School in Kathmandu Valley.
+977-015244451 || +977-015190010
© All Rights Reserved @ Pathshala Nepal Foundation Pvt.Ltd. || Developed by: Sandip Pokhrel